အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ယောက်ျားတွေရဲ့ ကမ္ဘာ
တချို့ယောက်ျားတွေ ရှိပါတယ်.....လူက လူဆိုးမဟုတ်ဘူး၊ ပုံစံက အမိုက်စားမဟုတ်ဘူး၊ အဲ့လိုပဲ ငတုံးငအ လဲမဟုတ်ပြန်ဘူး၊ ဂုဏ်မောက်ပြီး မာန်တက်နေတာမျိုးလဲမရှိဘူး...........တခုပဲ သူ့ကမ္ဘာက ကျဉ်းလိုတယ်။ ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးကိုမဆို ပေါ့ပေါ့လေးပဲ တွေးတယ် မြင်တယ် လုပ်တတ်တယ်။
Posted by တီချမ်း at 2:03 AM
ကျနော်လည်း ကျနော့်အထွာနဲ့ကျနော် ကမ္ဘာကျယ်တယ်။ သူလည်းပဲ သူ့အထွာနဲ့သူ့ကမ္ဘာကျယ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ယောက်ပေါင်းတစ်ကမ္ဘာမဖြစ်ပဲ တောင်ပင်လယ်နဲ့ မြောက်ပင်လယ်ဖြစ်နေတယ်။
အိမ်ထောင်သက် ၈ နှစ်ပါ။ အကြိုက်စရိုက်တော်တော်ကွဲပါတယ်။
ဘယ်လိုဆက်စပ်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားပေးပါဦး တီချမ်း
Crystal January 14, 2012 at 11:34 AM
ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ ဦးနှောက်ကို အသုံးပြုပြီး
သည်းခံတဲ့နေရာမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ သည်းခံနိုင်မယ်ဆိုရင်
(အမယ် တဲဆိုတဲ့စာပဲ) :P
တီချမ်း January 14, 2012 at 12:12 PM
ရှင်က ယူထားပြီးသားကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ လာမေးနေတယ် ဒွတ်ခ
တီချမ်း January 14, 2012 at 10:42 PM
တီချမ်းရေ အိမ်ထောင်သက် (၇ နှစ်) ကျော် ပြီ သည်းခံခဲ့ပေါင်း လဲများနေပြီ။ စိတ်ဆင်းရဲ ရပေါင်းလဲ များနေပြီ။ သူနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတာ အရမ်းမှားသွားပြီ။
ဖိုးစိန် January 15, 2012 at 2:44 AM
နေမှကောင်းရဲ့ လား. သတိရလွမ်းနေတာ။ ဟင်းမှချက်နိုင်ရဲ့ လား။ ဘယ်တွေခြေရာဖျောက်သွားလေသလဲ. ခုရော...
တီချမ်း January 15, 2012 at 9:24 PM
အမ် အခုမှ ဘယ်က ပြန်ပေါ်လာတာလဲ
ရွံတွေပေနေတဲ့ ခြေထောက်က ခုထိ မဆေးရသေးဘူး